Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny tongolobe manta manontolo izao dia tsaroana noho ny Salmonella
Ny tongolobe manta manontolo (mena, mavo, ary fotsy) aondrana avy amin'ny Prosource Produce LLC ao Hailey, Idaho, vokatra avy amin'ny fanjakan'i Chihuahua, Meksika, dia averina eny an-tsena noho ny mety ho fandotoana ny Salmonella.
Tsy tokony hohanin’ny mpanjifa ireo vokatra notsiahivina voalaza etsy ambany na ireo sakafo misy ireny tongolo manta ireny. Ireo mpaninjara, mpaninjara, mpanamboatra, ary toeram-pivarotana sakafo toy ny trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, trano fisotroana kafe, hopitaly, ary trano fitaizana be antitra dia tsy tokony hanompo, hampiasa, na hivarotra ireo vokatra tsaroana voalaza etsy ambany.
Ireto vokatra manaraka ireto dia namidy tany Ontario sy Quebec ary mety nozaraina tany amin'ny faritany sy faritany hafa.
Ireo vokatra ireo koa dia mety namidy betsaka na anaty fonosana kely misy marika na tsy misy marika ary mety tsy mitondra ny marika na anarana vokatra mitovy amin'ny voalaza etsy ambany. Hanohy ny fanadihadiana momba ireo mpanafatra hafa mety hanafatra ny CFIA ary mety hisy ny famerenana fanampiny.
Brand Product Size UPC Codes fanazavana fanampiny
Big Bull Peak Fresh Mamokatra Sierra Madre Mamokatra Markon Voankazo Voalohany Markon Essentials RioBlue ProSource Rio Valley Imperial Fresh Tongolo mena Tongolo mavo Tongolo fotsy Kitapo harato: 50 lb 25 lb 10 lb 5 lb 3 lb 2 lb Carton: 50 lb 40 lb 25 lb 10 lb 5 lb Miovaova Ny vokatra rehetra
nafarana eo anelanelan'ny
31, 2021. Ny vokatry ny fanjakana
Raha mieritreritra ianao fa narary tamin'ny fihinanana vokatra tadidy dia antsoy ny dokoteranao.
Hamarino raha manana ny vokatra voatadidy ao an-tranonao na orinasa ianao. Ireo vokatra tadidy dia tokony hatsipy na haverina amin'ny toerana nividianana azy ireo. Raha tsy azonao antoka ny mombamomba ny tongolo eo aminao, dia zahao miaraka amin'ny toeram-pividiananao.
Ity fampahatsiahivana ity dia nateraky ny fampahatsiahivana tany amin'ny firenena hafa. Ny maso maso misahana ny sakafo kanadianina (CFIA) dia manao fanadihadiana momba ny fiarovana ny sakafo, izay mety hitarika ny fahatsiarovana ireo vokatra hafa. Raha tadidio ireo vokatra hafa mety hampidi-doza dia hampandre ny besinimaro amin'ny alalàn'ny fampitandremana momba ny Food Recall Warnings ny CFIA.
Tsy nisy aretina voalaza tany Kanada mifandray amin'ny fihinanana ireo vokatra ireo.